Banyere Anyị - Ning Bo Xuanyi Machinery Co., Ltd.
Ning Bo Xuanyi Machinery Co., Ltd. Bụ ọkachamara na ihe karịrị afọ 10 nke ntụ ntụ metallurgy, bụ ọkachamara na mmepụta nke ígwè isi, n'ibu Ọdịdị nke igwe anaghị agba nchara elu arụmọrụ, elu kpọmkwem, ala mkpọtụ mmanụ amị ọla kọpa isi ngwaahịa mmepụta -oriori ụlọ ọrụ, ngwaahịa na-ọtụtụ-eji ụgbọala, ọgba tum tum, ezinụlọ ngwa, electric ngwaọrụ, ụlọ ọrụ na ngwá, ugbo ígwè, akwa igwe, igweoduakwa, Micro moto na dị iche iche instrumentation na ndị ọzọ na ụlọ ọrụ.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ngwa ọrụ mmepụta ihe nke ụlọ, ndị ọrụ aka, guzobere ụlọ pụrụ iche kemịkalụ, nke nwere akụrụngwa nnwale zuru ezu, dịka nhazi atọ, ngwa onyonyo onyonyo, Blowell hardness tester, dijitalụ vickers ekweghị ekwe igwe, microscope metallographic ma wusie njikwa njikwa ike, kwekọọ na eu ahịa na iwu steeti nchekwa gburugburu ebe obibi, iji hụ na ogo nke mmepụta ahụ tọrọ ntọala siri ike.
Nke eweputara site na Japan na akụrụngwa anụ ụlọ nke kachasị elu nke 6 tọn ruo 500 tọn; Mdị ntupu na-aga n'ihu na-eme ka ọkụ ọkụ eletrik 18 inch 2, 24 inch 1; Ọkara ton, 1 ton mixer ọ bụla 1; 1 uzuoku blackening oku; Nhazi usoro Ngwongwo igwe ihe eji edozi ọla edo, ihe igwe CNC, ihe nile di iche iche nke si na Japan, Switzerland karia ihe eji abuo 20 nke igwe oru nhazi oru eletrik, ya na ikike nke onwe ya nke imezi ihe di iche; Ruo ugbu a, anyị emepụtawo ihe karịrị ụdị 1500 akụkụ dị iche iche nke ụdị dị iche iche, gụnyere akụkụ akụkụ na akụkụ gia na ọdịdị geometrical dị mgbagwoju anya, ihe dị elu na nke anụ ahụ na ihe ndị a chọrọ. 70% nke ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ na ndị nrụpụta ụlọ na nke ndị si mba ọzọ jikọtara, 70% nke ngwaahịa ndị metụtara ya bụ ozugbo. ebupuru na Germany, Iran, South Korea, Tunisia, Pakistan, Spain, Japan na obodo na mpaghara ndị ọzọ. companylọ ọrụ a na-enweta kwa afọ nke 3500 tọn, ihe dị ka 85 nde iberibe ntụ ntụ metallurgy ngwaahịa ikike.
Priselọ ọrụ ahụ enwewo ngwa ngwa mmepụta ngwá ọrụ, ndị ọrụ aka ọrụ ọkachamara na usoro nlekọta njikwa siri ike, na usoro nke ezigbo okwukwe njikwa iji nye ndị ahịa ọrụ dị mma. Uru dị mma maka ndị ahịa bụ ebumnuche anyị na-agbaso, anyị kwenyesiri ike na ọ bụ naanị imeri -win bụ nduzi mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, anyị ga-, dị ka mgbe niile na-agbasosi ike na ihe ndị ahịa chọrọ, mepụta ngwaahịa dị elu, na nkwụghachi maka nkwado ndị ahịa na ntụkwasị obi!
Anyị kwenyere na ezi okwukwe anyị ga-alaghachi ihu ọma nke ahịa!
Anyị kwenyere na ngwaahịa anyị ga-apụta ìhè!